Renata Dress PDF ကိုအပ်ချုပ်စံနမူနာ – အဆိုပါ Tailoress
Coats / ဂျာကင်အင်္ကျီ
နေအိမ် / အမြိုးသမီးမြား / အဝတ်အစား / Renata Dress PDF ကိုအပ်ချုပ်စံနမူနာ
categories: အဝတ်အစား, အမြိုးသမီးမြား
အရွယ်အစားအတွက်ရရှိနိုင်:4/6/ 8 / 10 / 12 / 14 / 16 / 18
ထိုကြည့်ရှုကျေးဇူးပြုပြီး RENATA DRESS TUTORIAL here.
pattern ပိုစတာပုံနှိပ်ဖို့ Adobe Reader ကို အသုံးပြု. ဘယ်အရွယ်အစားစာရွက်ပေါ်တွင်ပုံနှိပ်နိုင်သည့်တစ်ဦး fullscale copyshop PDF ဖိုင်ရယူရန်စာရွက်စာတမ်းအဖြစ်လာ. Also available broken up onto A4 and US Letter sized pages. The separate pages have page numbers and markers to help you align each page correctly after printing.
Copyshop အရွယ်အစား: 129cm x 101cm / A4 Pages: 28 / US Letter: 28
£ 6.21 စျေးဝယ်ခြင်းထဲသို့ထည့်သည်
£ 2.53 စျေးဝယ်ခြင်းထဲသို့ထည့်သည်
£ 2.88 စျေးဝယ်ခြင်းထဲသို့ထည့်သည်
£ 4.83 စျေးဝယ်ခြင်းထဲသို့ထည့်သည်
တစ်ဦးအမျိုးအစားကိုရွေးချယ်ပါ ပစ္စည်းများ ဦးထုပ် ကလေး ပစ္စည်းများ Leggings Preemie ကလေး Rompers / Sleepsuits လုပ်ကွက် ကလေးများ အမြိုးသမီးမြား ကလေးများ ပစ္စည်းများ အလိုက်အဝတ်အစား အဝတ်အစား အဝတ်အစား Leggings Romper / အိပ်စက်ခြင်းဝတ်စုံ ထိပ် ခွေး ပစ္စည်းများ အမျိုး ခွေးဘီလူး Dachshunds ထီးတပါး & Whippets အဝတ်အစား ဂျာကင်အင်္ကျီ Jumper Pyjamas ထိပ် အခမဲ့ပြုလုပ်နိုင်စေ ပရိဘောဂ ကလေးစောင် အိမ်ထောင်ပရိဘောဂ Menswear ပစ္စည်းများ ကို T-ရှပ်အင်္ကျီ TEST Uncategorized အမြိုးသမီးမြား ပစ္စည်းများ Coats / ဂျာကင်အင်္ကျီ အဝတ်အစား အဝတ်အစား Jumper စားဆင်ယင် Jumpsuits Lingerie ဇာတ်လမ်းတိုများ ထမီ ရေကူးဝတ်စုံ ထိပ် ဘောင်းဘီရှည် Leggings အင်္ကျီ